Ubusisekile uShenge emukelwa ngothando - Ilanga News
Home Izindaba Ubusisekile uShenge emukelwa ngothando
Bekugujwa iminyaka ewu-40 kwasungulwa iMangosuthu
ZALWE kabusha empilweni yayo iNkosi Mangosuthu Buthelezi ibona izitshudeni nezikhulu zenyuvesi eyayisu-ngula ziyemukela ngenhlokomo egcwele uthando ngempelasonto emcimbini wokugujwa kweminyaka ewu-40 iMangosuthu University of Techonolgy (MUT) yasungulwa.
Umcimbi uqale ngoLwesihlanu ihholo ligcwele liphuphuma izi-tshudeni ezindala esezaphumelela empilweni eziphume kule nyuvesi. Ibiphelezelwa wumndeni wayo nezikhulu ze-IFP.
Ngesikhathi ikhuphukela esiteji iphahlwe nguVice Chancellor waseMUT, uDkt Duma Malaza, nezicukuthwane, inyosi ibiyihasha. NgoMgqibelo kusihlwa, iNkosi Buthelezi ibambe ongezansi isifundiswa esinophondo ekhanda, ebesiyisikhulumi sosuku, uDkt Moss Mashamaite – ongumbhali wezincwadi – eyisho sengathi uya-yibongela ngemisebenzi yayo eyenzele abantu baseNingizimu Afrika.
UDkt Mashamaite uqale inkulumo yakhe kuhle kwebhanoyi lisuka esikhumulweni sezindiza, wenyuka waze wafinyelela emkha-thini ngempilo nemisebenzi ye-Nkosi Buthelezi kwezemfundo.
Uthe iNkosi Buthelezi:
Yiyo yodwa engumuntu wo-mdabu owakha izikhungo zemfu-ndo eziningi eNingizimu Afrika, kubalwa amakolishi, izikole zamabanga aphansi nenyuvesi.
Yalwa neziqubulo zokuthi inkululeko phambili imfundo emuva ngezikhathi zobandlululo.
Yehlula umbuso wobandlululo usunike zonke ezinye izabelo uzimele geqe, yona yathi cha.
Yaze yaxoshwa e-University of Fort Hare iyisishoshovu samalu-ngelo entsha.
*Ayishongo ukuthi isencane ngeminyaka ukuze ilwele izwe layo.
UDkt Mashamaite uqhubeke wathi ngokwakhe, bawu-10 abantu ababa neqhaza elibonakalayo eNingizimu Afrika, abatshala kwaqhibuka izithelo ezasiza aba-ntu, iNkosi Buthelezi ingomunye wabo. Iphuphuma injabulo iNkosi Buthelezi, ibonge kakhulu abahleli bomcimbi ngendlela obusezi-ngeni eliphezulu ngayo.
Ithe: “Umngani wami, uMnu Harry Openheimer, wangibuza umbuzo wathi yini angangisiza ngayo, ngathula ngacabanga nga-thi ngicela akhele intsha yakithi isikhungo semfundo ephakeme sezobuchwepheshe. Sasingadide-kile ngokwakha le nyuvesi eMlazi, sasihlose khona ukuba intsha yakithi ibe semathubeni okuzuza imfundo yezobuchwepheshe.
“Bheka nje ukuthi eminyakeni ewu-25 sathola inkululeko, intsha isakhala esifanayo, intula imisebenzi,” kusho iNkosi Buthelezi.
UShenge uhlekise izethameli elanda ukuthi wayehamba no-mngani wakhe womlungu eMlazi ngezikhathi zobandlululo, yena ehleli ngemuva emshayelela imoto.
“Umngani wami wabona abantu bengibingelela, bephakamisa izandla wathi kimi ‘udumile, ba-kwazi bonke laba bantu.’ Nga-mphendula ngathi, akusikho ukuthi ngidumile, babona isimanga umuntu ompisholo eshayelelwa imoto ngumlungu, bacabanga ukuthi ungushofa wami‚” kuncokola iNkosi Buthelezi.
Umcimbi ubuphethwe ngesizotha nguSolwazi Alfred Msomi, iqembu lomculo weJazz laseMlazi Comtech High School, linandise ngolozolo lomculo.
Previous articleI-sharks ingene esigabeni somkhumulajezi kwi-super rugby
Next articleBakhala ngokungaqoqwa kukadoti